Maxaa ka jira in shaqaalaha shirkadda Boeing ay sii ogaayeen cilladda haysata nooca 737 Max – Bandhiga
Maxaa ka jira in shaqaalaha shirkadda Boeing ay sii ogaayeen cilladda haysata nooca 737 Max
Shaqaalaha shirkadda sameysa diyaaradaha ee Boeing ayaa sanadkii 2016 la sheegay in ay isu direen farriimo ku saabsan cillad ay ku arkeen diyaaradda nooca 737 Max oo ahayd noocii labada jeer galaaftay nolasha boqolaal qof.
Dukumeentiyo qoraal ah oo shirkaddani Boeing ay ku wareejisay garyaqaannadeeda ayaa muujinayay in mid ka mid ah duuliyeyaasha diyaaraddaasi uu sheegay in dhibaato aan horey loo sii shaacin uu la kulmay xilli uu tijaabinayay diyaaraddaasi.
Waxa uu sheegay in “isaga oo aan is ogayn” uu been ugu sheegay hay’adda ilaalisa badqabka diyaaradaha ee Mareykanka.
Cillad dhanka hannaanka badqabka ee diyaaraddaasi ayaa lala xiriirinayaa laba shil oo ay ku dhinteen 348 qof.
Diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo nooceedu ahaa 737 Max ayaa bishii Maarso ee sanadkan burburtay daqiiqado uun ka dib ay ka duushay garoon ku yaal magaalada Addis Ababa, waxaana shilkaasi ku dhintay 157 qof.
Shilkaan ayaa sababay in hakad la geliyo isticmaalka diyaaraddani Boeing ee nooceedu yahay 737.
Maalinta Calanka Soomaaliyeed 12 Oktoobar, dib u milicso Taariikhda
Maraakiib iyo Doonyo fara badan oo lagu arkaya Xeebaha Puntland iyo Malaay badan oo la jilaaftay
Buurta Kilimanjaro oo weli Gubanaysa
Noloshaada wax Badan ayaa Ka dhiman haddii toddobaad kasta aadan sidan sameynin!